Ipakeji ye-Semalt E-Commerce ye-SEO-isixhobo esifanelekileyo sokwenza iTrafiki
Njengeqonga le-SEO kunye neNtengiso, iSemalt yenzelwe iinkonzo ezininzi, zonke ezinokuba luncedo kumashishini akho e-commerce. Ngaba ungomnye wamawaka eenkampani ze-e-commerce phaya? Ngaba ujonge umboneleli ngenkonzo onokuthi aqinisekise ukuba izithuthi ziyafumaneka kwiwebhusayithi yakho? Ewe, uphando lwakho luphelile. Apha eSemalt, sihlangabezana nazo zonke iimfuno zakho ze-SEO. Ukufumana ngakumbi malunga neenkonzo zethu, ungacofa apha.
Njengomntu osomashishini kunye nosomashishini, siyayiqonda intlungu yakho xa ufaka iinzame zakho, kodwa akakho umntu onokuyixabisa. Sinceda ukuba ubeke inkampani yakho kunye neshishini kwindawo ephezulu yokukhangela, kwaye sikugcina ulapho.
Iinkonzo zethu azizukubonelela nje ngesilayi sepayi okanye eyona payi yakho; sihlala sikunika izilwanyana-ngale ndlela awulungelanga usuku, iveki okanye inyanga. Nje ukuba uliqabane kunye nathi, iqela lethu liya kuhlala lihlalutya iwebhusayithi yakho kwaye lilungiselela umgangatho wayo. Siza kukubonelela ngomjelo ozinzileyo wezithuthi onceda ukuthengisa inkampani yakho.
Ukuqhuba ishishini eliphumeleleyo lwe-e-commerce namhlanje, udinga ngakumbi kunye nokugcwala kwabantu kwiwebhusayithi yakho. Kodwa oko akwanele; Ukwafuna olo nqakraza ukuhlala, ukuhamba kwindawo yakho kwaye ufumane iinkonzo okanye iimpahla abazifunayo.
Ke yintoni oza kuyifuna iwebhusayithi yakho ukuze ikwazi ukurhoxisa okunje kwaye ikuzisele inzuzo engenantsingiselo, kulungile impendulo ilula — Semalt e-commerce SEO package.
Imfihlo yethu ixhomekeke kwisakhono sethu sokuvelisa i-organic traffic. Ndiyakholelwa ukuba uvile ngee-SEO, kodwa ukuba ungakhathazeki; sinenqaku elifanelekileyo kuwe. Kukufunda ngokukhawuleza nangokulula okuya kukunyusela kwisantya kungekho xesha. Cofa apha ukuze ufunde iziseko ze-SEO.
Ukuba uqhelene ne-SEO, uyazi ukuba i-organic traffic ayifani nezinye izibonelelo zokuthengisa kwiwebhusayithi yakho. Ayikuko ukuba ufumana kuphela "ukuthembeka" ngokuchofoza, kodwa kwakhona kukhululekile. Njeshishini elitsha, siyaqonda ukuba ukungena ngeenyawo zakho akunakuze kube lula. Ukwakha ubudlelwane, ukulwa izinja ezinkulu kwaye ukuhlawula konke okudingayo kunokuba nzima. Oku kwenza ukuba kufutshane nokungabinakho ukuhlawula amaphulo ahlawulelweyo kwiinjini yokukhangela.
Nangona iinkonzo ezihlawulelwayo zikwenza ucofe ngokukhawuleza, kuya kwenzeka ntoni xa uphelelwe yimali ukuze ubaxhase? Ngaba unokuqinisekisa ukuba indawo yakho iya kugcina eso sikhundla? Kungenxa yoko le nto i-organic SEO eqhutywa kukugcwala. Ngethrafikhi esebenzayo, uyazi ukuba iwebhusayithi yakho ayibhalwanga kuba uyihlawulela, kodwa uyazi ukuba i-E-commerce SEO yakho isebenza kakuhle kwiimeko eziphambili.
Nangona kunjalo, rhoqo kunokuba kungenjalo, abanikazi beshishini lwe-e-commerce abakwazi ukuxhaphaza izibonelelo ze-SEO. Abakaqinisekanga ukuba bawakha njani na amaphepha okuhlala, malunga nathi ngamaphepha okanye iinkonzo zenkonzo / zemveliso. Le nto inoxanduva lokutshabalalisa amashishini aliqela abenamandla amakhulu. Ngaphandle kolwazi kunye nobuchule bokuzoba i-traffic, iwebhusayithi yakho ihlala ithule ukuqokelela uthuli lwe-cyber.
Kude ube ufumane i-SEO yakho ilungile, ukwandisa uhlahlo-lwabiwo mali lwakho akuyi kukunceda kakhulu. Akukho ndlela uya kundwendwela indawo ngaphandle komxholo omnandi kwaye uhlale. Kodwa ikho indlela yokuphuma. Ukuba uziva ngathi ubetha udonga xa uzama ukuzoba ithrafikhi kwindawo yakho, ufuna ukubanjwa okuchwephesha. Kwaye ngokungafani nezinye iiwebhusayithi ezininzi, siyafikeleleka, sinamava kwaye sikubeka kwindawo yokuqala.
Ukukunika okona kulungileyo, iqela lethu libandakanya iingcali zezoqoqosho, abaphandi, ababhali, kunye nengcali eqinisekisa ukuba zonke iimfuno zakho kunye nale webhusayithi yakho ziyafezekiswa. Ngale ndlela, akukho mntu umi ithuba lokubetha wena phezulu.
Ulwazi olusebenzayo lwe-E-commerce lwee-SEO onokulusebenzisa ukuze ufumane inqanaba
Phambi kokuba siqalise ukwabelana nabanye ngeengcebiso, siye saqulunqa ezi ngcebiso ngokusekwe kuphando olubanzi malunga nendlela esizenze ngayo iiwebhusayithi zethu ukuba zisebenze, izimvo zentengiso, iindlela zangoku kunye neendlela ezilungileyo zokuziphatha. Ngaphambi kokuba uzame naziphi na ezi ngcebiso ngokwakho, sithanda ukucacisa ukuba yonke iwebhusayithi ikhethekile kwaye ikhethekile. Oku kuthetha ukuba akukho siqinisekiso sokuba oku kuya kukusebenzela. Ukufumana okungcono, ufuna okona kulungileyo. Fumana iqela lethu lobuchwephesha ukuba lihambe kwindawo yakho kwaye ulinike ukuchukumiseka kweengcali.
Ngokwakho, naluphi na utshintsho olwenzayo kwiwebhusayithi yakho kufuneka lwenziwe ngononophelo olukhulu.
Vumela ii-injini zokukhangela zifunde uphononongo kwindawo yakho
Enye yeendlela ezilungileyo zokutsala abathengi abatsha ngokwenza ukuba izimvo zabasebenzisi abadala zibonakale kubo. Oku kukonyusa ukubonakala kwakho ngolwazi olukhethekileyo kwiphepha lakho lokuchaza. Akukho mntu ufuna ukuthenga kumthengisi ongenalo uhlaziyo. Ngama-scammers amaninzi kwi-intanethi, kuya kufuneka wakhe ukuthembana ngaphambi kokuba abathengi babe nokujikeleza iinkonzo zakho. Izifundo zibonise ukuba ngaphezulu kwe-90% yabasebenzisi be-intanethi bayathemba ukujonga abathengi. Ngokubonisa uphononongo lwakho kwiinjini zokukhangela, abathengi bathi baziva beqinisekile ngesiza sakho kunye nemveliso leyo. Emva koko, abayi kuba nangxaki yokuhambela iwebhusayithi yakho ukukujonga.
Ukuqaqambisa ezi ziphononongo kukwanemizamo ye-e-commerce ye-SEO. Uphononongo olunobutyebi obuninzi lukhankanya iinkonzo zakho kunye namanye amagama aphambili e-SEO asabonakala kwisiza sakho. UGoogle uyakuqonda oku, kwaye iwebhusayithi yakho ime ithuba elingcono lokufika kwindawo ephezulu.
Inzuzo enkulu yokuhlaziywa komthengi kukuba banika abathengi imbono. Oku kufanelekile kuba bathetha kwizibonelelo ozibonelelayo ngombono owahlukileyo.
Yenza Inkcazo yeMeta enamandla
Inkcazo yeMeta kukunxiba kwakho nayiphi na intlanganiso. Ukubonakala kwayo kugqiba indlela ekuthathwa ngayo ngamalungu ebhodi yakho. Ihempe etyhoboziweyo kunye nomtya ojijekileyo ayiyi kukufumana ikhontrakthi. Xa ii-injini zokukhangela zibonisa iziphumo kwi-intanethi, zongeza ukubhala okuncinci phantsi kwesihloko okanye iwebhusayithi echaza oko uyakufumana ukuba ucofa ikhonkco. Yiyo ke into esiyibiza ngokuba yimethadatha. Imethadatha yakho ibalulekile ekukholiseni abasebenzisi ukuba bacofe ikhonkco lakho hayi elabanye.
Ukubhala inkcazo ye-meta, ngaphandle kwamagama aphambili akukho kulunga. Kufana nokubukela intengiso engayichazanga imveliso abayithengisayo. Njeshishini lwe-e-commerce elihlala lizitshintsha iimveliso zalo, inkcazo ye-meta iya kutshintsha rhoqo kwaye ifumane indlela yokuyigcina ibandakanyeka kunokuba nzima. Njengenkampani encinci le yokuchitha ixesha kunye namathuba ongenayo ngobuninzi yile nto uninzi lwamashishini lukhetha iingcali ze-SEO ezifana noSemalt ukubanceda.
Okokugqibela, qinisekisa ukuba inkcazo yemethadatha yakho yahlukile. Abafundi bakho bafuna ukukukholelwa ukuba wahlukile kwaye ubalulekile nangaphambi kokuba bandwendwele indawo yakho.
Gcina inkcazo yemveliso yakho yahlukile
Umxholo ohlukileyo uye waba yinto ephambili ukusukela oko uGoogle wakhupha iPanda algorithm. Le algorithm igxile ekukhuthazeni imixholo ekumgangatho ophezulu kuqala. Injongo yolu phuculo yayikukubohlwaya iiwebhusayithi ezikopisha imixholo yezinye iwebhusayithi.
Enye yeendlela ezilungileyo zokuphucula iwebhusayithi yakho ngokwahlukileyo kunye nomxholo we-SEO. Oku kukubeka kwimeko entle yokubonwa kwaye iindwendwe zakho ziva imvakalelo ekhethekileyo exhasa ukuthengwa kunye neengcebiso.
Kubanini bewebhusayithi esele zikho, kububulumko ukuba ujonge indawo yakho ngayo nayiphi na imixholo ephindiweyo. Ukuba ubona nayiphi na, yiphinde. Oku kukunika ithuba ukhuphiswano lwakho.
Sebenzisa uphawu lwesikimu phezulu
Ukuchaphazeleka kwesikim sesinye sezona zixhobo zibalulekileyo xa ujongene ne-eCommerce SEO. Ngelishwa, ihlala isesesinye sezixhobo ezingasetyenziswanga kakhulu kwi-E-commerce SEO. Ezi zincinci zincinci ziphucula iziphumo zakho ngokubeka ukulinganiswa kwenkwenkwezi kunye neethegi zexabiso ngqo kuGoogle. Ukhe wabona ukuba ukhetha ukuthenga kwiiwebhusayithi apho ubona imveliso kunye nexabiso layo phaya kwiphepha lesiphumo sikaGoogle? Esi sisixhobo esiphambili esisisebenzisayo kwiiwebhusayithi zakho.
Ngelixa le ayisiyiyo eyona nto ilandelayo, olu lwazi lubonakalayo lubonelela wonke umsebenzisi ukuba acofe ikhonkco lakho.
Ngonxibelelwano lwethu lweengcali kunye nazo zonke ezi zinto zinomdla, akukho sizathu sokuba ungayi kufuna ukuba iwebhusayithi yakho ibekumgangatho ophezulu kuGoogle. Ngamaxesha amaninzi, sizama konke okusemandleni ukunciphisa iindleko kodwa ngakwintoni na? Ngokufumana uncedo olungeyongozi, awuniki nje iwebhusayithi yakho eyona nto ingafunekiyo. Akukho mntu unokwenza yonke into ngesandla esinye, kwaye kuba sifuna ukunceda amashishini ukuba akhule, iinkonzo zethu zifikeleleka kakhulu. Ukuba unemibuzo, ungaqhagamshelana nabaxhasi bethu abathengi apha . Bahlala bekulungele ukubonelela iimfuno zakho. Banobuhlobo kwaye bangathanda ukuva kuwe ukuze ungazibeki. Baza kuphendula yonke imibuzo yakho kwiinkonzo zethu okanye imibuzo enxulumene ne-SEO. Sijonge ukuva kuwe.